2011 ~ विज्ञान संसार
Posted by Om Bhandari On 6:55 AM
मह बनाउने मौरी एक घण्टामा औसत रूपमा 13 देखि 15 माइलसम्म उडन सक्छ ।
एक औन्स मह उत्पादन गर्नको लागि एउटा मौरीले औसत रूपमा 1600 चक्कर यात्रा
गर्ने गर्छ । त्यसले एक चक्कर काट्नको लागि करीब6माइलको यात्रा गर्ने
गर्छ । यस हिसबले हेर्ने हो भने एउटा मौरीले2पौण्ड मह उत्पादन गर्नको
लागि पृथ्वीलाई चार पटक चक्कर लगाउन लाग्ने बराबरको दूरी यात्रा गर्ने
एक पौण्ड मह उत्पादन गर्नको लागि मौरीहरुको समूहले 20 लाखवटा फूलहरूको
चक्कर काटेको हुन्छ ।
मौरीको एउटा घारमा 40-45 हजार मौरीहरू हुन्छन ।
मानिसको लागि खानेकुरा उत्पादन गरिदिने एउटै मात्र कीरा मह उत्पादन गर्ने
मौरी हुन ।
एक पौण्ड मैन उत्पादन गर्नको लागि मौरीले 8 पौण्ड मह खाएको हुन्छ ।
मौरीको घारको औसत तापक्रम 93.5 डिग्री हुने गर्दछ ।
रानी मौरीले एक दिनमा करीब2हजार वटा अण्डाहरु पार्ने गर्छे ।
Posted by Om Bhandari On 7:01 AM
भिटामिन हाम्रो लागी कुनै नौलो नाम होइन । आज हामी धेरै थोरै मात्रामा
भिटामिनको प्रयोग दिनहु गरिरहन्छौ । तर हामीलाई यसको इतिहास थाहा नहुन
सक्छ । आउनुहोस्, भिटामिन संवद्ध केही जानकारी थाहा पाऔ ।
भिटामिनको इतिहास सन् 1720 देखि सुरू भएको पाइन्छ । तत्कालिन समयमा
अष्ट्रियाली सैनिक चिकित्सक क्रमेर (Kramer) ले स्कर्भी (Scurvy) रोगका
लागि सुन्तला तथा हरिया सागसब्जीका माध्यमबाट उपचार गराएको पाइन्छ ।
त्यसपछि ब्रिटिस नौसेनाका क्याप्टेन लिन्ड (Lind) ले प्रयोगबाट यो
प्रमाणित गरिदिएका थिए कि कागती तथा सुन्तलाको पर्याप्त मात्रामा सेवन
गराएमा स्कर्भीबाट मुक्ती पाउन सकिन्छ । यो सन् 1753 तिरको घटना हो ।
त्यस पछि यस विषयमा उल्लेख्य प्रगति हुन पुग्यो । पछि सन् 1890 मा डा.
आइजकम्यान (Dr. Eijkman) ले कुखुराका चल्लाहरूलाई मिलमा कुटाएको चामल
खुवाएर अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ गरेका थिए । यसो गर्दा कुखुराका
चल्लाहरूमा बेरीबेरी रोगमा जस्तै स्नायुप्रणालीको क्रियामा असन्तुलन आएको
पत्ता लगाए । त्यसपछि त्यो रोगलाई निको पार्ने दिशातिर कदम चाले । पछि
डा.आइजकम्यानका एक सहयोगी मित्रले एउटा कुखुराको चल्लालाई केही समयसम्म
ढिकीमा कुटेको चामल खुवाएर पाले जुन चल्लाको अवस्थामा विस्तारै विस्तारै
सुधार आएको पाए ।
सन् 1911 मा पोल्याण्डका डा. क्यासिमिर फुन्क (Dr. Casimir Funk) त्यति
बेला लन्डनको लिस्टर इन्सिच्युटमा कार्यरत थिए र उनले बेरीबेरीविरूद्धको
तत्व पत्ता लगाए । उनका अनुसार यस पदार्थको रासायनिक संरचना एक एमिन
(Amine) थियो । त्यस कारण यसको नाम उनले भिटा-एमिन (Vita-Amine) राखे ।
भिटा एक ल्याटिन शब्द हो जसको अर्थ जीवनका लागी अवश्यक पदार्थ हुन्छ ।
ह्युमन फिजिकोलजीमा भिटामिनको परिभाषा यसप्रकार दिइएको छ :- "यो
प्रभावशाली जैविक यौगिक हो जुन सबै खद्य तथा पेय पदार्थमा अत्यन्त कम
अर्थात सूक्ष्म मात्रामा रहन्छ । यो प्रणीहरूको जीवनका लागि अवश्यक
विशिष्ट शारिरिक क्रियाबाट सामान्य रुपमा अपूर्ति हुन्छ । यसका लागि
व्यक्तीको शरीरमा भिटामिनको बाह्य स्रोतबाट आपूर्ति हुन आवश्यक हुन्छ । -
(Chatterjee, Human Physiology, p. 451) ।"यसरी भिटामिन यौगिकको विकास
क्रम अझैसम्म जारी रहेको छ । हाल भिटामिनका विभिन्न प्रकारहरू पत्ता
लागिसकेको छ । जस्तै कि सन् 1915 मा म्यककोलम तथा डेभिसले अण्डाको पहेलो
भागमा भिटामिन ए पत्ता लगाएका थिए । त्यस्तै 1918 मा मेलेन्बिले माछाको
तेलमा भिटामिन डी हुने कुरा पत्ता लगाए । सन् 1922 को ताका वरिपरि इभान्स
तथा बिसप नामका वैज्ञानिकहरूले भिटामिन ई पत्ता लगाई यसको नाम
टोकोफेरोल्स (Tocopherols) राखेका थिए । जहा टोकोसको अर्थ बच्चाको जन्म र
फेरोको अर्थ जन्म दिनु हुन्छ । यस्तै जर्मन रसायनशास्त्री डाम (Dam) ले
भिटामिन के को खोज गरेका थिए । यसले रगत जमाउने याने Cogulation को काम
गर्दछ । जर्मन भाषामा कोगुलेसन शब्द K अक्षर बाट सुरू हुनेभएकाले उनले
यसको नाम भिटामिन के राखेका थिए । यस्तैनै सन् 1928 मा ग्योर्गीले
भिटामिन सि स्वतन्त्र रूपमा प्राप्त गरे पछि सन् 1933 मा रिचस्टेइनले
प्रयोगशालामा बनाउन सफल भए । यसलाई एस्कोर्बिक एसिड (Ascorbic Acid) पनि
भनिन्छ । भिटामिनको खोजक्रम अझै जारी रहेको छ ।
Posted by Om Bhandari On 4:11 AM
कन्ट्याक्ट लेन्स एक बाक्लो प्रकारको पारदर्शी प्लास्टिकको कप हो । यो
0.06 मिलि मिटरदेखि 0.15 मिलि मिटरसम्म बाक्लो हुन्छ । यसको डायमिटर 5.5
मि.मि. देखि 15 मि.मि. सम्मको हुन्छ जुन आँखाको सिधै कर्निया (Cornea) को
माथि राखिन्छ । कन्ट्याक्ट लेन्सको प्रयोग गर्नुको प्रथम उद्देश्य
चस्माको प्रयोग विना वस्तुलाई स्पष्ट तथा स्वाभाविक तरिकाले देख्न सकियोस
भन्ने हो । खासगरी आँखामा हुने दुरदृष्टि तथा अदुरदृष्टिका समस्या
हटाउनकालागी चस्माको प्रयोग गरिन्छ । कन्ट्याक्ट लेन्स जलविन्दु जस्ता
कतिपय आँखाको बिरामीका लागि त यो थेरापीको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ ।
त्यस्तै खेलकुद, नृत्य, र चलचित्र क्षेत्रमा सम्बद्ध मानिसहरूले लेन्सलाई
चस्माको सजिलो वैकल्पिक साधनका रूपमा लिएका छन । यस प्रकारको लेन्सको
प्रयोगले एथलेटहरुको प्रस्तुति राम्रो भएको प्रमाणित भइ सकेको छ । यसका
अतिरिक्त कन्ट्याक्ट लेन्सको प्रयोग सौन्दर्य बढाउन पनि गरिन्छ । विभिन्न
प्रकारका लेन्स प्रयोग गरि आँखाको रुपनै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसमा
भएको पछिल्लो विकासले टाढाको वस्तु देख्न नसकिने आँखाको कमजोरीलाई विशेष
प्रकारको कन्ट्याक्ट लेन्सको प्रयोगले कम गर्न सकिने भएको छ ।
अर्थोकार्टोलोजी नामक यो प्रविधि तुलनात्मक रुपमा महँगो भएता पनि यसको
प्रयोगबाट आशातित सुविधा पाउन सकिन्छ । आउदो वर्षहरुमा कन्ट्यक्ट लेन्समा
भारि परिवर्तन आउने वैज्ञानिकहरुको नितन्तरको प्रयाशले देखाउदछ ।
जूनकिरी कसरी बल्छ ?
Posted by Om Bhandari On 9:16 PM
सामान्यत: गर्मी मौसममा मात्र पाइने जूनकिरीको पछाडि पिलपिल गरि बल्ने
बत्ती विभिन्न रसायनहरूको समीश्रणका कारण बल्छ । यी रसायनहरूमा अक्सिजन,
ल्युसिफेरिन नामक पिग्मेन्ट, ल्युसिफेरेज नामक इन्जाइम र कोषमा शक्ति
प्रदान गर्ने तत्व एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट पर्छन । बत्ती बाल्नको लागि
प्रयोग गरिने कोषहरूमा रहेका युरिक एसिडका क्रिस्टलहरूले प्रकाशलाई
परावर्तन गरेर बत्तीलाई अझ चम्किलो पार्छन् ।
यद्यपि जूनकिरीको बत्ती पिलपिल गर्नुको कारणमा भने जूनकिरीको स्नायु
कोषहरूले गर्छन कि अक्सिजनको प्रवाहले गर्छ भन्ने कुरामा वेज्ञानिकहरू
द्विविधामा छन । तर, करिब2हजार प्रजातिहरू रहेका यि जुनकिरीहरूको बत्ति
पिलपिल गर्नुका धेरै प्रायोजन भने थाहा लागेको छ । जूनकिरीहरू विपरित
लिङ्गीलाई आकर्षित गर्न पिलपिल बत्ति बाल्छन । विभिन्न प्रजातिका
जूनकिरीहरू छुट्टाछुट्टै शैलीमा पिलपिल गर्दछन । यसले जूनकिरीहरूलाई
आफ्नै प्रजातिको अर्को जूनकिरी थाहा पाउन सजिलो हुन्छ । यिनीहरू यो
पिलपिल गर्ने बत्तिलाई सुचना अदानप्रदान गर्न पनि प्रयोग गर्दछन ।
जूनकिरीबाहेक अरू थुप्रै प्राणीहरूले पनि बत्ती बाल्छन । यस्तो बत्ती
बाल्ने प्राणीको गुणलाई वैज्ञानिक भाषामा बायोल्युमिनेसेन्स भनिन्छ ।
वैज्ञानिकहरूको धारणा के छ भने समुन्द्रको गहिरो भागमा बस्ने 90 प्रतिशत
प्राणीहरूमा बायोल्युमिनेसेन्स गुण हुन्छ ।
पानी परिसकेपछि मीठो वास्ना कसरी आँउछ ?
Posted by Om Bhandari On 9:00 PM
धेरैलाई पानी परेपछि आउने बास्ना मीठो लाग्छ । यस्तो वास्नालाई वसन्त
रितुसँग जोडिएर व्यख्या गरिन्छ । तर, धेरैलाई मीठो लाग्ने यस्तो वास्ना
पानी परिसकेपछि किन आउँछ त ?
पानी परेपछि आउने वास्नाका कारण धेरै हुन सक्छन । त्यस्तै प्रकारको मीठो
बास्ना हामी जंगलमा पनि पाउँछौँ । वास्तवमा यस्तो मीठो वास्ना
व्याक्टेरियाको कारण आउँछ । एन्टिनोमाइसिटिज नामक व्यक्टेरिया ओसिलो र
न्यानो जमिनमा चाँडै विकास र फैलने हुन्छ । जब जमिन सुक्छ, त्यसपछि ती
व्यक्टेरियाहरूले स्पोर्सहरुको उत्पादन गर्छ । यो स्पोर्सहरू हावामा
फैलिन्छन् र ओसिलो हावामा रहेका पानीका कणहरूसँग मिसिएपछि मीठो बास्ना
निस्कन्छ । व्याक्टेरियाहरू पृथ्वीको हरेक कुनामा हुन्छन् । त्यसैले
व्यक्टेरियाहरूको कारणले आउने यो बास्नाबाट सबै परिचित हुन्छन् ।
पानी परेपछि निस्कने बास्नाहरूमध्यको एक अर्को बास्ना पानीमा हुने अम्लको
कारण आउँछ । हावामा हुने विभिन्न रासायनिक तत्वहरूका कारण विशेषगरी शहरी
क्षेत्रहरूमा पानीमा अम्लको मात्रा केही बढी हुन्छ । अम्ल मिसिएको यस्तो
पानीले जमिनमा रहेका रासायनिक तत्वहरूसँग प्रतिक्रिया गर्छ, जसको कारणले
बास्ना उत्पादन हुन्छ । तर, यस्तो तरिकाबाट निस्कने बास्ना खासै मीठो
हुदैन । त्यसैले पनि पानी पर्दा जहिले पनि मीठो बास्ना निस्कदैन ।
विरुवा तथा रूखहरूले उत्पादन गर्ने भोलाटाइल (चाँडै वाफ भई उडेर जान
सक्ने) तेलहरूको कारण पनि पानी पर्दा बास्ना आउँछ । यस्ता भोलाटाइल
तेलहरू चट्टानहरूको सतहमा जम्मा भएर बस्छन् । वर्षाको पानीले यस्ता
तेलहरूसित रासायनिक प्रतिक्रिया गर्छ र त्यसपछि ग्याँसको रूपमा हावामा
छरिइन्छन् । यो प्रकारको बास्ना पनि मीठो हुन्छ । यो बास्नालाई त बटलमा
कैद गरेर सेन्टहरू बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ ।
वर्षापछिको बास्नाका अरू थुप्रै सूक्ष्म कारणहरू हुन्छन । त्यसैले कसैसँग
यस्ता बास्नाहरूको बारेमा विवाद गर्दै हुनुहुन्छ भने याद गर्नुहोस्
तपाइहरू दुवै सही बोलिरहनुभएको हुनसक्छ ।
Posted by Om Bhandari On 8:01 PM
प्राय: सबैलाई लाग्दो हो, 'धुलोको खासै महत्वपूर्ण काम छैन । धुलो नभइदिए
त दिनदिनै घर सफा गर्नु पर्दैनथ्यो । सबै कुराहरू सफा सुग्घर हुने थिए
साथै मानिसलाई विभिन्न श्वासप्रश्वासका रोगहरू लाग्ने थिएन ।' तर, धुलो
नहुँदो हो त त्यो भन्दा पनि बढी समस्या पर्ने थियो । यदी धुलो नभएमा पानी
धेरै पर्ने थिएन, सूर्यास्त हामीले देख्ने गरेको जस्तो सुन्दर हुने थिएन
पानी पर्नुमा वायुमण्डलमा हुने धुलोका कणहरूको धेरै ठूलो योगदान हुन्छ ।
धुलोका कणहरूले वायुमण्डलमा वाफका रूपमा रहेका पानीका अणुहरूलाई सोस्ने
गर्छ । यसरी पानीका अणुहरू धुलोका कणहरूमा जम्मा हुदैँ जाँदा, विस्तारै
त्यो गह्रौँ हुन्छ । र, अन्त्यमा निकै गह्रौँ भएपछि पानीका ति अणुहरू
वर्षाको रुपमा जमिनमा झर्छ ।
त्यस्तै सूर्योदय तथा सूर्यास्त सुन्दर देखिनमा पनि धुलोको महत्वपूर्ण
भूमिका छ । सूर्योदय र सूर्यास्तको समयमा, जब सूर्य क्षितिजभन्दा तल
हुन्छ, पानीका कणहरू मिसिएका धुलाका कर्णहरूले लामो वेभलेन्थ (तरङ्ग
लम्बाइ) भएको रातो प्रकाशलाई परावर्तन गरी वायुमण्डलमा फिजाइदिन्छ, जसका
कारण आकाश रातो देखिन्छ । वायुमण्डलमा जति धेरै धुलाका कणहरू हुन्छन,
सूर्योदय र सूर्यास्त त्यति धेरै सुन्दर देखिन्छ ।
खुट्टा किन गन्हाउँछ ?
Posted by Om Bhandari On 11:13 AM
हामी मध्ये कयौँ गन्हाउने समस्याले हैरान भएका हुन्छौं । कहीँ जुत्ता फुकालेर कोठामा जानु परेमा अप्ठेरो हुन्छ । जिउ जति नै बास्ना आउने भएपनि खुट्टा त यति गन्हाउने हुन्छ कि त्यस व्यक्तिको अगाडि बस्नै नसकिने हुन्छ । हाम्रो खुट्टा गन्हाउनुको मुख्य कारण के हो त ? हाम्रो खुट्टा गन्हाउनुको प्रमुख कारण पसिना हो । प्रत्येकमा २ लाख ५० हजारभन्दा बढी पसिना ग्रन्थि हुने हाम्रा खुट्टाहरू शरीरमा सबैभन्दा बढी पसिना आउने ठाउँहरुमध्ये पर्छन् । एक दिनमा हाम्रो एउटा खुट्टाले करिब ४५० मिलि लिटर पसिना निकाल्छ । पसिना भनेको प्रमुख रुपमा पानी र नुनको मिश्रण मात्र हो । त्यसैले पसिना आफैँ भने गन्हाउने हुँदैन । पसिना गन्हाउने मुख्य कारण त हाम्रो छालामा हुने ब्याक्टेरियाहरु हो । ब्याक्टेरियाले हाम्रो छालामा उत्पादन हुने पसिना खान्छ । र, पसिना खाइसकेपछि ब्याक्टेरियाले दिशाको रुपमा निकाल्ने तत्त्व नै पसिना गन्हाउनुको प्रमुख कारण हो । पक्कै पनि हाम्रो शरीरको सबै भागमा पसिना आउँछ । हाम्रो हातहरूमा पनि प्रशस्त पसिना ग्रन्थीहरु हुन्छन् । तर, खुट्टाजस्तै शरीरका अन्य भागहरु त्यति गन्हाउँदैनन् । के फरक छ त खुट्टा र शरीरका अन्य भागहरुमा ? यसको उत्तर हो मोजा र जुत्ता । जुत्ता र मोजाका कारण खुट्टाबाट निस्कने पसिना हातहरू र शरीरका अन्य भागमा निस्कने पसिना जस्तो सजिलै बाहिरी हावासँग सम्पर्कमा आउन सक्दैन । यो खुट्टा र मोजामै टाँसिएर बस्छ । ब्याक्टेरिया अँध्यारो, ओसिलो र चिसो ठाउँमा चाँडै फैलिने हुँदा खुट्टातर्फ आकर्षित हुन्छ । कसैकसैको खुट्टा अरुको भन्दा धेरै गन्हाउनुको कारण चाहिँ उनिहरुको खुट्टामा धेरै पसिना आउनु नै हो । र, तपाईँले याद गर्नुभएको होला, धेरै हिँडियो भने पनि खुट्टा धेरै गन्हाउँछ; कारण उही हो : धेरै हिँड्दा धेरै पसिना आउनु ।
Posted by Om Bhandari On 5:02 AM
Posted by Om Bhandari On 6:55 PM
Posted by Om Bhandari On 12:20 PM
हामीलाई थाहा छ कि लाफिङ्ग ग्यास अलिकती सुँघेमा मात्र पनि हामि मरिमरी हास्न पुग्दछौ । यस्तो ग्यास उत्तेजित भिड साम्य पार्न र नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ । तथा अन्य विविध प्रयोजनका लागी पनि लाफिङ्ग ग्यासको प्रयोग गरिन्छ । वास्तवमा लाफिङ्ग ग्यास नाइट्रस अक्साइड हो । नाइट्रस अक्साइड(N2O) नाइट्रोजन(N) र अक्सिजन(O) को प्रतिक्रियाबाट बनेको हुन्छ । यो रङ्गविहीन कम क्रियाशिल र पनीमा सजिलैसंग घुल्न सक्ने ग्यास हो । हसाउने ग्यासले प्रख्यात नाइट्रस अक्साइड धेरै मात्रामा सुँघेमा हामि अचेत अवस्थामा पुग्न सक्छौ । तर केहि मात्रामा सुँघेको खण्डमा मष्तिष्कको सुक्ष्मकोषहरुलाई उत्तेजित पार्दछ फलस्वरुप शरीरमा हलुका खालको उत्तेजना पैदा हुन्छ जुन मानिसले हासेको जस्तो हुन्छ याने भित्र जस्तो भएतापनि मान्छे जबरजस्त हास्न पुग्दछ ।
Posted by Om Bhandari On 3:41 AM
हालसम्मको विज्ञान इतिहासले दर्शाए अनुसार पृथ्वीमा जीव उत्पत्तिको एउटै सिद्धान्त रही आएको छ । सो कुरालाई जीव रसायनशास्त्रको महत्वपूर्ण सिद्धान्तले पुष्टि गर्दछ । जस अनुसार पृथ्वीमा उत्पत्ति भएका प्रत्येक जीवको बनोट ६ वटा प्रमुख रसायन तत्वले बनेको हुन्छ, ती हुन: कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन, सल्फर र फोस्फोरस । यस सिद्धान्तलाई Golden Rule of Bio-chemistry पनि भनिन्छ । तर हालै पत्ता लागेको आर्सेनिक रसायन उपयोग गर्ने व्याक्टेरियाले जीव उत्पत्तिको फरक धारलाई इंगित गर्दै पृथ्वी बाहेकका अन्य खगोलीय पिण्डमा जीव उत्पत्तिको बारेमा गहिरो ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
साईन्स जर्नलको डिसेम्बर २०१० अंकमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाको उत्तरी क्यालीफोर्निया स्थित मोनो तालमा आर्सेनिक रसायन प्रयोग गर्ने व्याक्टेरिया पत्ता लागेको हो । उक्त अध्ययनको प्रमुख अध्ययनकर्ता Felisa Wolfe-Simon र उनका सुपरिवेक्षकहरु प्राध्यापक Davies र प्राध्यापक Anbar का अनुसार उक्त व्याक्टेरियाले प्रचलित जीव रसायनशास्त्रको सिद्धान्त विपरीत आफ्नो संरचना तथा उपयोगमा आर्सेनिक प्रयोग गरेको पाइयो । यस अनुसन्धानका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार यो अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य जीवमा साधारणतया विषालु मानिने आर्सेनिकले फोसफोरसको ठाउँ लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने थियो । यस उद्देश्यलाई अगाडि बढाउन अनुसन्धानकर्मीहरुले आर्सेनिकको मात्रा बढी भएको मोनो तालमा अध्ययन गरेको थिए । उक्त व्याक्टेरियाले आफ्नो बासस्थानमा पाइएको आर्सेनिकलाई नै प्रमुख स्रोतको रुपमा प्रयोग गरेको पाइयो ।
यस तथ्यलाई पुष्टि गर्न अध्ययनकर्ताले उक्त व्याक्टेरियालाई प्रयोगशालामा क्रमिक रुपमा बढी आर्सेनिकको मात्रा दिई हुर्काएका थिए । परिणाम आश्र्चयचकित तुल्याउने थियो । व्याक्टेरियाले आफ्नो विकास क्रममा आर्सेनिकलाई शक्तिको रुपमा मात्र उपयोग नगरी डि.एन.ए. मा नै फोसफोरसलाई विस्थापन गरी आर्सेनिकलाई समेटेको पाइएको थियो । यस अघि पनि कतिपय व्याक्टेरियाले आर्सेनिकलाई शक्तिको रुपमा प्रयोग गरेको पाइएको छ तर आफ्नो शरीरको संरचनामा नै उपयोग गरेको पाइएको भने यो पहिलो हो । यो अनुसन्धानको परिणाम जीवन सम्बन्धी हाम्रो परम्परागत वैज्ञानिक धारणा भन्दा पृथक नयाँ रहस्योद्घाटन तर्फ उन्मुख रहेको छ । यद्यपि, अनुसन्धानको तत्कालिन परिस्थिति सम्म जीवनको उत्पत्तिको नयाँ बाटो भने खुट्याउने नसक्ने प्राध्यापक म्बखष्भक भन्नुहुन्छ र उक्त परिणाम व्याक्टेरियाको क्रमिक विकासको अनुकुलन (Evolutionary adaption) हुन सक्ने प्राध्यापक Davies विश्वास गर्नुहुन्छ । तर, अनुसन्धान आफ्नो पहिलो वर्षमा नै रहेको र नयाँ तथ्य फेला परेको कुरा सर्वसम्मत भएकोले, जीवनको दोस्रो शुरुवात सम्बन्धी धारणालाई नकारी हाल्नु पर्ने भने नभएको कुरा उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ । यस्तै गरी, यो खोज पृथ्वी बाहेकका खगोलिय पिण्डमा जीवनको सम्भावनालाई पनि डोर्याएको छ । शनि ग्रहको उपग्रह अर्थात् टाइटनमा प्रयाप्त रुपमा आर्सेनिक रहेको र उक्त ग्रहको तापक्रम आर्सेनिकको स्थायित्वको लागि उपयुक्त रहेकोले टाइटनमा आर्सेनिक प्रयुक्त जीवनको सम्भावना सम्बन्धी जिज्ञासा बढाएको छ र अन्ततः यस अनुसन्धानले के जीवन सृष्टीको फरक धार हुन सक्छ भन्ने प्रश्नमा थुप्रै चासो र चर्चा बटुलेको छ ।
- रविन्द्र पाण्डेय (विज्ञान लेखमालाबाट)